I-Semalt Iingcali zoLwazi Iintlobo zee-Intanethi zeNtshonalanga kunye neendlela zokuziphepha
I-intanethi yintsimi enkulu kumntu wonke. Abanomashishini abaninzi bathabathaisicwangciso se-e-yorhwebo njengendlela entsha yokuthengisa. Ngewebhu, kukho ithuba elingenamkhawulo kunye nethuba lokuqala. Nkampani ezinkuluuthathe eli thuba kwaye wenza iiwebhusayithi ezininzi. Ubungcali bokuthengisa ezifana ne-Search Engine Optimization lunceda nayiphi na isiqalo sokuqala sokukhatywa kwe-intanethikwaye uyenze. Abantu kunye namashishini banokuqonda ezinye iingeniso ezifanelekileyo ezivela kwizigidi zabafundi bee-internets ezizisa - αντιηλιακη κρεμα προσωπου με χρωμα vichy.
Nangona kunjalo, njengoko abantu bacinga ukubeka iiwebhsayithi, izigebengu ze-cyber ezifana nabaculi kunyei-scammers yenza iintlobo ezahlukeneyo zobuqhetseba kwi-intanethi. Ngenxa yoko, wonke umntu kufuneka aqikelele ezi ntlobo zolwaphulo-mthetho. Bangakwazi ukususakunye neengxowa-mali ezinkulu, kunye nokwenza ezinye iintambo ezingafunekiyo kwi-intanethi.
uAndrew Dyhan, ingcali iSemalt IiNkonzo zeDivithali, zenzele iintlobo zobuqhetseba be-intanethi ezinokujamelana nawe nezindlela onokuzisebenzisa ukuze uziphephe.
1. Ukukhwabanisa kwekhadi lesikweletu
Abahlaseli abaninzi bajolise kwiiwebhusayithi zokuthengisa kunye nezinye iiplani ze-intanethi zamakhadi-mboleko.Ukweba amakhadi esikwereti kunokwenza abahlaseli bafikelele kwizigidi zeerhafu zabaxhasi. Ngaphezu koko, bathengisa amakhadi ekwerethi asebiwe kwi-intanethi emnyamakwiimarike ezifana ne-Outlaw. Kubalulekile ukuba uqaphele iindlela zokungcebeleka ezifana ne-SQL Injection kunye nezinye iindlela ezigxekisayoukhuseleko lweentengiso ze-intanethi..Ngaphezu koko, kubalulekile ukukhuthaza abaxhasi bakho kwiindlela abaphuli-mthetho abasebenzisa ukutshintsha amakhadikwaye ugcine amakhadi abo ekhredithi. Ngaphezu koko, indawo yendawo yekhadi kwiindawo ezithembekileyo kuphela.
2. Izikratshi kunye ne-imeyile
Ama-imeyili anika ishaneli ekhuselekileyo yokwenza abakwa-scammers bafinyelele iithagethi zabo. KwezinyeKwiimeko, zinokukwenza izilwanyana ezininzi ezivumela abaqhetseba ukuba benze abantu balahlekelwe ngamawaka eedola kwi-intanethi. Kufuneka uphephe ii-imeyile ezizayokwimithombo engaqinisekisiwe. Kwezinye iimeko, ungasebenzisa ezinye izihlungi eziphambili ze-spam ezikhoyo kwezinye iinkqubo ze-imeyili ezikhuselekileyo. Amanyathelo anjaloUnokukhusela ishishini lakho le-e-yorhwebo kwimpembelelo ye-intanethi kunye nezinye iintlobo zokuhlaselwa. Kufuneka ugcine iwebhusayithi yakho ikhululekile kulawakunye nezinye iintlobo zokuhlaselwa.
Olu hlobo lobuqhetseba lwe-intanethi lubandakanya ukukhohlisa umntu ekunikezeni ulwaziiphepha lokukhohlisa. Uninzi lwezihlaselo zogaxekile ziqukethe iphepha lokuphanga kunye nezinye iintlobo ezinxibelelwano ezinobungozi. Kwezinye iimeko,abakwa-spammers bangafaka iinkcukacha eziqulethe i-Trojans kwi-imeyili. Ezi zintsholongwane zingenza imiphumo emininzi kwikhompyuthelwe ekujoliswe kuyo njengesiqulathiukukhwaza. Basenokusebenzisa iindlela zobuqhetseba zokuba baqondise abantu kumaphepha enkokhelo, kunye nokwaba ulwazi lwekhadi lokuthenga ngetyala kwizinye iinkqubo zolwaphulo-mthetho.
Kukho iintlobo zabantu ngabanye kwi-intanethi. Njengoko abantu benza zonke iintlobo ezincedoukuqala nge-intanethi, abanye abantu abaneenjongo zokugula benza iindlela zokwenza ubugebengu babo. Ngokomzekelo, abantu bahlala benamathuba okuncedanabanye ngewebhusayithi yezorhwebo. Ngakolunye uhlangothi, abahlaseli banokukhahlela kwaye bathathe imali kubathengi kunye nokudiliza isayithi. OkuIsikhokelo sinokukunceda ukuba ugweme ubuqhetseba be-intanethi obunokujamelana nawe njengemali yokutshatyalaliswa kwemali. Ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye nomthengi wakhobuxoki ezandleni zakho.